द्रुतमार्गमा सुरुङ र ठूला पुलबाहेक सबै काम सेनाले गर्ने – Jaljala Online
कात्तिक २६, काठमाडौं । बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को डीपीआर स्वीकृत भएयता अलमलमा रहेको सेनलो अब नयाँ अवधारणअनुसार गति अघि बढाउने भएको छ ।
सेनाको नयाँ अवधारणअनुसार सेना आफैंले तीन सुरुङ र केही ठूला पुलबाहेक सडक कालोपत्रे, नाला, कल्भर्ट, पर्खाल र अन्य पुलहरु आफैँ निर्माण गर्ने भएको हो ।
विवादमा तानिएको योजना प्रमुखको कामबाट आयोजना ढिलो हुँदै गएपछि प्रधानसेनापतिले आयोजनामा व्यापक सुधार गर्दै नयाँ अवधारणमा सेना आफैँले काम गर्नेछ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाश लम्सालले लेखेका छन् ।
आज २०७६ असोज २६ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । सानो प्रयासले नै काम बन्नेछ। सुन्दर पहिरनमा मन रमाउनेछ। […]
जेठ ५, बर्दिया । प्रदेश ५ मा सवारी दुर्घटना बढेको छ । पछिल्लो नौ महिनामा मात्रै ४ सय ९६ जनाले सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका छन् । प्रदेश ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा साना तथा ठूला सवारी दुर्घटनामा परी उनीहरुको ज्यान गएको हो । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुपन्देहीमा सबैभन्दा […]